"Sleeve Up" yeKuvhurazve Tourism muBali nekubaina munhu wese
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » "Sleeve Up" yeKuvhurazve Tourism muBali nekubaina munhu wese
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mahotera nemahombekombe hazvina chinhu, kushaya mabasa ndiko kwakajairika. Vanhu muBali vari kutambura. Kufamba neKushanya ndihwo hwaro hweichi chiwi cheIndonesia uye chirongwa chakaziviswa, uye chiri munharaunda yakafara, kuve nerutsigiro runodiwa kuti rufambe.
Iyo yakakosha yekufambisa uye yekushambadzira indasitiri yasvika pakamira paChitsuwa chevaMwari.
Bali Hotel Association iri kushanda pamwe nehurumende mukuvimbisa chirongwa chakakura chekudzivirira vashandi kune vevashanyi chikamu uye vagari muBali zvachose.
Sleeve Up chirongwa chekugona kuvhurazve Hindu Island yeBali kune vashanyi zvakare uye kumisikidza COVID-19 korridho korridha pachitsuwa.
Mune chirevo chevatori venhau Bali Hotels Association nhasi yati iri kutsigira zvizere chirongwa chekudzivirira hutachiona hweHurumende yeIndonesia ne Bali Hupenyu Hwangu #sleeveup mushandirapamwe. The Bali Hotera Association yakakurudzira uye yakatsigira nhengo dzemahotera nenzvimbo dzekutandarira dzakasaina kuve nzvimbo dzekudzivirira.
Isu tiri tese mune izvi pamwe chete meseji yatinoramba tichida kutumira.
Mushandirapamwe wazvino uno unonzi "Sleeve Up." Icho chiitiko munharaunda-yekukurudzira munhu wese kubayiwa nhomba. Simona Chimenti, weBHA Marketing uye Media Relations Director anoti "Tiri kuramba tichitsigira zvirongwa zveHurumende neNharaunda zvine chekuita nechinangwa chekubaiwa." Bali Gavhuna uye manejimendi ake vari kutarisira kubaya vanhu vangangosvika mamirioni 2.8 mumazuva zana, sezvo vakuru vakuru vachitsvaga kusvika makumi manomwe muzana yevagari vemudunhu kuti vawane hutachiona. Vanhu vanosvika zana nemakumi mana kusvika pari zvino vakabayiwa nhomba, zvinoenderana nedata rehurumende, vanopfuura zviuru makumi mana nezvina vakagamuchira madosi maviri anodiwa kubva purovhinzi yatanga kubaira vanhu pakati paNdira.
Chirongwa chekudzivirira vanhu vazhinji chakanangana nevanhu muUbud, Nusa Dua, neSanur chikamu chekugadzirira mukana wepurovhinzi kuvhurwa kwekushanya kwekunze nepakati pegore rino.
Kugadzira idzi nhatu nzvimbo dzakasvibirira chikamu chekuyedza kuvhura kushanya kweBali.
Vatungamiriri veIndonesia vari kukurudzira zvakare "kufamba mukoridho kurongwa" nenyika dzinoverengeka, dzinoonekwa dzakabudirira mukuva nekupararira kwecoronavirus, dziine huwandu hwekubaiwa nhomba, uye dzinogona kupa mabhenefiti ekudzokerera. eTurboNews ichangobva kudaidzwa iyo InDonesian Tourism uye Gurukota Rezvehupfumi Gadzira Sandiaga Uno gurukota rinogarisana zvakanyanya.
Uno akambotaura - achipa mienzaniso yenyika dzakaita seNetherlands, China, United Arab Emirates (UAE), neSingapore.
VaBalinese vanonzwisisa kuti kubayiwa jekiseni chimwe chikamu chakakosha chezvinodiwa pasi pehutano hutsva nekuchengetedzwa kweCHSE.
Isu tinoramba tichikurudzira edu eBali Hotels Association nhengo dzemahotera kuti atsigire kubaiwa senzira yezvakazara 'Ita zvese!' nzira.
Bali Hotels Association nhengo dzemahotera uye nzvimbo dzekuchengetedza dzinovimbisa kuchengetedzeka uye kugara zvakanaka kwevaenzi vavo, vadyidzani nevashandi vanoramba vari pamberi pekutanga. Nekudaro, edu enhengo mahotera nenzvimbo dzekuchengetedza vakaita maitiro ehutano pamwe nekuchengetedza sekurairwa nehurumende nemasangano epasirese epasi rose. Izvi zvinosanganisira;
-Kumanikidza kupfeka mamask kunze kwekunge uchidya nekunwa uye panyama daro re 1.5 mita inochengetwa
- Tembiricha inotarisa
- Kugeza maoko
- Kunyoresa nehurumende kuonana kutsvaga maitiro.